Tirada askartii ku dhaawacantay qaraxii saakay ka dhacay degmada Mandheera oo sii korortay. – Radio Daljir
Nofeembar 24, 2011 12:00 b 0
Mandheera, Nov, 24 ? Wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya khasaarihii ka dhacay qaraxii ka dhacay degmada Mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya, ayaa ku waramaya in tirada dhaawacu xilligaan ay marayso illaa askari oo ka tirsan ciidanka milatariga dalka Kenya, sida ay warbaahinta Kenya u sheegeen saraakiisha militariga dalka Kenya ee ku sugan magaalada Mandheera.
Dadkii ku dhaawac-may qaraxaasi ayaa lagu soo waramayaa qaar-kood in dhaawacyadooda loola cararay dhanka magaalada Nayrobi ee caasumada dalka Kenya, waxaana xilligaan socda baaritaano ay halkaasi ka wadaan laamaha ammaanka dalka Kenya.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in goobta uu qaraxu ka dhacay ay isku waydaarsadeen rasaas ciidamo ka tirsan kuwo booliska Kenya, iyo rag hubaysan oo aan haybtooda lagaranayn, waxaana isla xilligii goobta ka baxsaday ragaasi.
Radhika Coomaraswamy, ku xigeenka xoghayaha QM u qaabilsan difaaca dhallaanka oo kulamo la yeelatay madaxda dawlada federaalka.